China S9-M S10-M S11-M S11-MR yekuparadzira shandura Kugadzira uye Fekitori | Fuda
Iko kuita kweiyo modhi S9-M, S10-M, S11-M, S11-MR 10kV akateedzana akazara-akavharirwa mafuta-akanyudzwa ekuparadzira maTransformer anoenderana nematanho GB1094 "Power Transformer uye GB / T6451-2008" technical Parameter uye Zvinodiwa zveTatu- chikamu Mafuta- akanyudzwa Simba Shanduko. Musimboti wayo unogadzirwa nemhando inotonhorera-yakasungirirwa yesilicon pepa uye ndeye yakazara-ngowani isina-kubaya chimiro uye coil yaro inogadzirwa yemhando isina okisijeni-isina mhangura. Unyanzvi pakuonekwa uye hwakachengeteka mukumhanya uye unoshandiswa zvakanyanya mukutapurirana nekuparadzirwa kwemaindasitiri uye ekurima netiweki.
Inotora radiator yemafuta tangi ye corm gated jira mhando kana yekuwedzera mhando Sezvo isingade mafuta ekuchengetedza, kukwirira kweshanduko kunoderedzwa, uye sezvo iyo transformer mafuta isingabvumirane nemhepo, kuchembera kwemafuta kunonoka, nekudaro kunowedzera nguva sen / chando hupenyu hweshanduki Iyo isina-mutoro kurasikirwa kweModel S1Q-M Is 20% yakaderera pane iya yeModel S9-M, uye S11-M iri 30% yakaderera pane S9-M. Shanduko dzakakwirira pakuvimbika, dzakafambira mberi mumitambo uye zvine hungwaru mumari dzehupfumi. Iyo tangi yemafuta yakasiyanasiyana mumhando uye inotaridzika yehunyanzvi uye yakashongedzwa.
Oiri yakanyudzwa maTransformer e1000kVA uye pamusoro ichave akagadzirwa nemasaini ekunze mathermeter uye akabatana nemasaini masaini. Mafuta akanyudzwa maTransformer e800kVA uye pamusoro ichave akagadzirwa nemagetsi anotumira uye ekumanikidza ekudzivirira zvishandiso, uye gasi yakanyudzwa ma transformer pazasi pe800kVA inogona kutaurirana nemugadziri zvinoenderana nebasa rebasa. Yakaoma mhando shanduko inofanirwa kuve yakagadzirirwa tembiricha yekuyera mudziyo, kazhinji 630kVA uye pamusoro.
1. Isina-yakavharwa oiri-yakanyudzwa transformer: inowanzo ine S9, S11 uye zvimwe zvakateedzana zvigadzirwa, izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mumabhizimusi uye emigodhi mabhizinesi, ekurima uye ehurumende zvivakwa.
2. Yakavharwa mafuta-akanyudzwa transformer: inowanzo ine S9, S9-M, S11-M uye nezvimwe zvakateedzana zvezvigadzirwa, izvo zvinonyanya kushandiswa munzvimbo dzine yakawanda kusvibiswa kwemafuta uye zvimwe zvinhu zvemakemikari muma petroleum nemakemikari maindasitiri.
3. Yakavharirwa mafuta-akanyudzwa transformer: inowanzo ine BS9, S9-, S10-, S11-MR, SH, SH12-M uye nezvimwe zvakateedzana zvezvigadzirwa, zvinogona kushandiswa kugovera magetsi mumabhizimusi uye emigodhi mabhizinesi, kurima, vehurumende. zvivakwa nedzimwe nzvimbo.
Technical Paramende ye10kV nhanho. S9-M, S10-M. S11-M Series nhatu-chikamu chizere-chisimbiso chisiri-chekufadza-pombi-chinja yekuparadzira shanduko.
Pashure: Matatu matatu oiri akanyudzwa transformer
Zvadaro: SH15 dzakateerana amorphous chiwanikwa zvakazara akanyudzwa transformer
110kv Oiri Yakanyudzwa Simba Shanduko
Oiri Yakanyudzwa Distribution Shanduko
Oiri Yakanyudzwa Simba Shanduko
S11 Series YeOiri-Yakanyudzwa Shanduko
S13 Series YeOiri-Yakanyudzwa Shanduko